RASMI: Xiddigaha Saalax, Firmino iyo Becker oo wajahaya kooxda Lyon kulanka dhawaan soo galaya – Gool FM
(Yurub) 31 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa si rasmi ah u shaacisay in saddexda xiddig ee kala ah Maxamed Saalax, Roberto Firmino iyo Alisson Becker ay ciyaari doonaan kulanka ay la dheelayaan naadiga Lyon.
Kooxda Liverpool ayaa bayaan rasmi ah ku soo qortay website-keeda iyo boggageeda rasmiga ah ee baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo Instagram-ka waxay ku xaqiijisay in saddexda xiddig ee Maxamed Saalax, Roberto Firmino iyo Alisson Becker ay ciyaari doonaan kulanka Lyon ee goordhow soo galaya.
Saddexdan ayaa waxay dib ugu soo laabteen kooxda Liverpool shalay oo Talaado ah markii ugu horeysay tan iyo bilowgii xilliga diyaargarowga ee xilli ciyaareedka cusub, kaddib markii ay xulalkooda kala qeyb galeen tartamada koobka Qaramada Afrika iyo Copa America.
Liverpool ayaa warbixinteedan ay soo saartay waxay sidoo kale ku sheegtay in labada xiddig ee Xherdan Shaqiri iyo Naby Keïta in qeyb ka noqon doonaan kulanka dhawaan soo galaya ee Lyon.
Liverpool ayaa la ciyaari doonta kooxda Lyon 20:00 ee caawa oo fiidnimo ah, kaasoo noqonaya kulankooda ugu dambeeya saaxiibtimo ay ciyaari doonaan, iyagoo kaddib isku diyaarinaya kulanka ay axada la ciyaari doonaan Manchester City.
Waakee ciyaaryahanka ugu fiican Premier League & kooxda horyaalka ku guuleysan karta xili ciyaareedka soo socda?... Waxaa ka jawaabaya Iniesta